Gyidi—Dɛn na Bible Ka?
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Marathi Myanmar Nepali Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Nnipa bebree gye wɔn ho di sɛ wɔyɛ nyamesomfo, nanso wubisa wɔn sɛ “gyidi” yɛ dɛn a, na ayɛ asɛm. Ɛnde yɛka gyidi a, ɛkyerɛ sɛn, na adɛn nti na ehia?
Dɛn ne gyidi?
Nnipa bebree adwene yɛ wɔn sɛ yɛka sɛ obi wɔ gyidi a, ɛkyerɛ sɛ ogye biribiara di; ɔnhaw ne ho nhwɛ nea enti a ogye di. Yɛmfa obi a ɔkɔ asɔre nyɛ nhwɛso. Ebia ɔbɛka sɛ, “Migye Onyankopɔn di.” Nanso wubisa no sɛ, “Adɛn nti na wogye Onyankopɔn di” a, ebia ɔbɛka sɛ, “Ɛno ara na yɛde tetee me” anaa “Efi me nkwadaaberem nyinaa saa na yɛakyerɛkyerɛ me.” Obi ka saa a, nea ɔrepɛ akyerɛ ara ne sɛ gyidi yɛ biribi a obi gye di kɛkɛ.
“Gyidi ne awerɛhyem a yɛde twɛn biribi a yɛn ani da so, nneɛma a yenhu ho adanse a ɛda adi pefee.” (Hebrifo 11:1) Dɛn na ɛbɛma obi anya awerɛhyem de atwɛn biribi? Ɛsɛ sɛ onya adanse a ɛkyerɛ sɛ ne nsa rensi fam. Asɛm a wɔakyerɛ ase “awerɛhyem a yɛde twɛn biribi” no nkyerɛ atenka anaa biribi a wo koma wom kɛkɛ. Enti yɛka sɛ obi wɔ gyidi a, ɛsɛ sɛ onya biribi anaa adanse bi gyina so.
“[Onyankopɔn] su horow a wonhu no ada adi pefee fi wiase bɔ so, efisɛ wɔnam nneɛma a wayɛ so na ehu, ɛno ne ne daa tumi ne ne Nyamesu.”—Romafo 1:20.
Adɛn nti na yehia gyidi?
“Gyidi nni hɔ a, obi ntumi nsɔ Onyankopɔn ani, efisɛ ɛsɛ sɛ nea ɔba ne nkyɛn no gye di sɛ ɔwɔ hɔ, na ɔyɛ wɔn a wɔn ani abere rehwehwɛ no no katuafo.”—Hebrifo 11:6.
Yɛadi kan ahu sɛ nnipa bebree gye Onyankopɔn di efisɛ saa na wɔakyerɛkyerɛ wɔn. Ebia wɔbɛka sɛ, ‘Me deɛ, saa na yɛtetee me.’ Nanso Onyankopɔn pɛ sɛ obiara a ɔsom no nya awerɛhyem paa sɛ ɔwɔ hɔ na ɔdɔ no. Ɛno nti Bible hyɛ yɛn nyinaa nkuran sɛ yɛnhwehwɛ Onyankopɔn na yɛatumi ahu no yiye.
“Mommɛn Onyankopɔn na ɔbɛbɛn mo.”—Yakobo 4:8.
Wobɛyɛ dɛn anya gyidi?
“Gyidi nam nea wɔte so.” (Romafo 10:17) Sɛ wubetumi anya Onyankopɔn mu gyidi a, nea edi kan koraa no ‘tie’ nea Bible ka fa ne ho. (2 Timoteo 3:16) Wusua Bible a, wubenya nsɛmmisa pii ho mmuae. Nsɛmmisa no bi ne: Hena ne Onyankopɔn? Dɛn na edi adanse sɛ ɔwɔ hɔ? Enti Onyankopɔn dwen me ho paa? Dɛn na Onyankopɔn abɔ ne tirim sɛ ɔbɛyɛ daakye?
Nneɛma a atwa yɛn ho ahyia nyinaa di adanse sɛ Onyankopɔn wɔ hɔ
Sɛ wopɛ sɛ wusua Bible a, Yehowa Adanse ayɛ krado sɛ wɔbɛboa wo. Wokɔ yɛn wɛbsaet jw.org/tw a, wubehu asɛm yi wɔ hɔ: “Yehowa Adansefo ani gye ho sɛ wɔne nkurɔfo besua Bible, nanso yɛnhyɛ obiara sɛ ɔmmra yɛn som mu. Yɛn deɛ ara ne sɛ yɛbɛma nkurɔfo ahu nea Bible ka. Nea obi pɛ sɛ ogye di deɛ, ɛwɔ ɔno ara ne nsam.”
Enti nea yɛreka akosi ara ne sɛ, sɛ wo gyidi besi pi a, gye sɛ wokenkan Bible no na wo ara wunya adanse sɛ nea worekenkan no yɛ nokware. Woyɛ saa a, na woresua nnipa bi a wɔtenaa ase tete no. Wosuaa Kyerɛwnsɛm no, na “wɔde wɔn adwene nyinaa gyee asɛm no, na da biara na wɔhwehwɛ Kyerɛwnsɛm no mu yiye hwɛ sɛ nsɛm no te saa anaa.”—Asomafo Nnwuma 17:11.
“Eyi ne daa nkwa, sɛ wobehu wo, nokware Nyankopɔn koro pɛ no, yiye, ne nea wosomaa no no, Yesu Kristo.”—Yohane 17:3.
Dɛn na Bible Ka Wɔ Gyidi Ho?